ပြင်ပနှင့်ပြည်ထဲရေး Flexible အထည်အလိပ်လေယာဉ်ရုံဂိတ် China Manufacturer
Home > ထုတ်ကုန်များ > မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး > ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဂိတ် > ပြင်ပနှင့်ပြည်ထဲရေး Flexible အထည်အလိပ်လေယာဉ်ရုံဂိတ်
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဓာတ်လှေကားတံခါးဝနှစ်ခုကုလားကာ, တစ်ဦးဒေါင်လိုက်ရွှေ့ပြောင်းရိုင်နှင့်အတူချိတ်ဆက်လူမီနီယမ်ထုပ်အကြားကိုအသုံးပြုကုလားကာအတွင်း၌နှင့်ပြင်ပရှိတစ်ဦးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပျော့ကုလားကာတံခါးကိုဖြစ်ပါတယ် ;, ခေါင်မိုးထုပ်အထူးသဖြင့်အတူတူပင်ဖြောင့်မျဉ်းကြောင်းများနှင့်လေယာဉ်ရုံအကြီးစားစက်ရုံများအတွက်အဆင့်ဆင့်ရှိသည်မဟုတ်သက်ဆိုင်သောဖြစ် ။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဓာတ်လှေကားတံခါးကိုတပ်ဆင်ခတံခါးကိုဖွင့်ဖို့ပထမဦးဆုံးအပြောင်းအရွေ့ inside.When တွင်းထဲမှာအတွင်းပိုင်းအာကာသကိုတက် ယူ. , နောက်ဆုံးတွင်အပေါက်ကျော် superimposed ပါဘူး။ ဒါဟာလုံးဝတံခါးပိတ်အထိအဖြစ်အပျက်ကုလားကာရထားလမ်းဟာ Off ပထမဦးဆုံးပြီးတော့ဆင်းကျလိမ့်မည်။
ပွဲတော်မင်္ဂအရွယ်အစား, ကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်တာရှည်ခံ, စွမ်းအင်ချွေတာ, လေတိုက်ဝန်ခုခံ, ယုံကြည်စိတ်ချရသောစစ်ဆင်ရေး။
အဆိုပါစူပါကြီးမားသောတံခါးကိုအထူးဒါပေါ်, aeroshed, အထိုင်အတွက် damp, ဖုန်မှုန့်, မြင့်မားသောသို့မဟုတ်အနိမ့်အပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ်ကြမ်းတမ်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူဓာတ်သတ္တုစက်မှုလုပ်ငန်း, ရေထွက်ကုန်နှင့်အခြားအထူးစက်မှုလုပ်ငန်းသံမဏိစက်မှုလုပ်ငန်းဒီဇိုင်းနှင့်နေသည်။
အဆိုပါပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဓာတ်လှေကားတံခါးဝအကြောင်းကိုအသေးစိတ်အချို့သည် --There နေသောခေါင်းစဉ်:
1. ခန္ဓာကိုယ်အတိုင်းအတာ: W60 X ကို H40 (M) သို့မဟုတ်ထက်ပို
2. မြန်နှုန်း: အနီးကပ် / ပွင့်လင်း (M / S) ကို 0.3-0.6 / 0.3-0.6
3. တံခါးကုလားကာအထူ (မီလီမီတာ): ကို Double-layer ကို 0.8
4. Transparent ပြတင်းပေါက်: မလုပ်မဖြစ်
5. လမ်းညွှန်ရထားလမ်း: 15mmH အပိုင်းသံမဏိ
6. ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်က: ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်အား
7. ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုစနစ်: Anti-ကျသွားကာကွယ်မှုစနစ်ကပျက်ကွက် Self-စစ်ဆေးခြင်းကိုစနစ်က
တံခါးမတော်တဆရေတံခွန်ဆန့်ကျင်အခမဲ့ -fall ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, တစ်ဦးချင်းစီဖွင့်လှစ်တင်ဆက်နှင့်စစ်ဆင်ရေးပိတ်ပြီးသူတို့ကိုလည်းပိတ်ထားတဲ့အနေအထားတံခါးကိုသော့ခတ် activated နေကြသည်။
အဆိုပါမော်တာလက်နှင့်အတူတပ်ဆင်နေသည်တစ် crank မှတဆင့်ဘရိတ်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်အရေးပေါ်စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုအပိုဆောင်းအထွက်ရိုး operated ။
တံခါးကိုပိတ်လိုက်သောအခါ၎င်း၏စုစုပေါင်းအလေးချိန်ဟာကိုပြုပြင်တာတွေအချက်များအကြားဖြန့်ဝေသည်။ ပြုပြင်တာတွေအချက်များအကြားအကွာအဝေးအကြောင်းကို 1000mm ဖြစ်ပါတယ်။ တံခါးကိုအရွက်ကိုယ်တိုင်ကမီတာအကျယ်နှုန်း 40 ကျော်မှ 80 ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်, ဒါပေမယ့်တစ်တိုက်မှု၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ဖြစ်ပေါ်ရသောအပိုဝန်၏အမြင်၌မထားဘူး။
လေတိုက်ဝန်တံခါးကိုအရွက်၏အလျားလိုက်လူမီနီယမ်အပိုင်းများအားဖြင့်ဒေါင်လိုက်လမ်းညွှန်သံလမ်းသို့ပြောင်းရွှေ့နေသည်။ အဆိုပါအပြည့်အဝ-welded ဗီနိုင်း coated polyester ထည်လာသောသေတ္တာသို့မဟုတ်လိမ်ကနေအလယ်အလတ်ကဏ္ဍများကိုကာကွယ်ပေးသည်။
လမ်းညွှန်သံလမ်းများတွင်သွားလာရသောချောဆီအရည်ကြည်-အခမဲ့လမ်းညွှန် roller, တံခါးကိုအရွက်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုအဆုံးမှာထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါတငျမွှောကျခါးပတ်အောက်ဆုံးအပိုင်းမြှင့်ရန်ခါးပတ်စည်ပေါ်ကိုအနာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါခါးပတ်စည်တပ်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ် အဆောက်အဦးပေါ်မှာစုစုပေါင်းဝန် 1.5 KN / မီတာမှာတွက်ချက်ရပါမည်။
တံခါးကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်တံခါးကိုအရွက်၏ဝန်လျှင်အောင်မြင်သောစက်သေတ္တာကြီးစွန်းမှလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေ၌စက် box ရဲ့အလေးချိန်ကိုသာကျန်ရှိကိုပြုပြင်တာတွေအချက်များကထောက်ခံသည်။
standard feature တွေအဖြစ်ပေးအပ်လုံခြုံမှု devices များအပြင်ခေါက်-up, partitions ကိုသီးခြားအဆိုပါ door`s အောက်ပိုင်းအစွန်းအပေါ်သက်ရောက်မှုအာရုံခံကိရိယာအဖြစ်တစ်ဆင်းတံခါးကိုရပ်တန့်ကြောင်းအဆိုကို detectors အတပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါသက်ရောက်မှုအာရုံခံကိရိယာတစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့, ရေဒီယို, induction ကွင်းဆက်သို့မဟုတ်ရွေ့လျားမှု detector အာရုံခံတံခါးဝကိုရွေးချယ်ထားပြီးသည့်အခါတစ်ဦးစံ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးက၎င်း၏နယ်မြေထဲသို့ဝင်သောအခါတစ်ဦး optional ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းအဖြစ်ရရှိနိုင်တစ်ဦးက photoelectric ဆဲလ်တံခါးကိုရပ်လိုက်နိုင်သည်။
Rolling Flexible ဂိတ်ရုပ်သိမ်းအမြင့်မြန်နှုန်းအထည်အလိပ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PVC အထည်အလိပ် Rolling ခေါက် Up ကို Flexible တံခါးရုပ်သိမ်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PVC အထည်အလိပ်ကြီးမားသောခေါက် Up ကိုကားဂိုဒေါင်တံခါးရုပ်သိမ်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လျင်မြန်စွာအရေးယူမြန်နှုန်းမြင့် stacking တံခါးကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လေဆိပ်အဘို့အပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထိပ်တန်းတံခါး ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဂိတ်လုံခြုံရေးတံခါး ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဓာတ်လှေကားတံခါး ဂိုဒေါင်အဘို့အပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တံခါး စက်ရုံပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တံခါး ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မြန်တံခါး ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအတွက်မြန်နှုန်းတံခါး ဂိုဒေါင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တံခါး